www.youtube.com ကနေ Download လုပ်ဖို့ နည်းတွေအများကြီးပါ. youtube downloader နဲ့ လုပ်လဲရတယ် . အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ version က နောက်ဆုံးထွက် version ပါ. အဆင်ပြေအောင် portable ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အားလုံးအဆင်ပြေကြမှာပါ .
(၁) real player နဲ့ Download လုပ်လဲရပါတယ် .
(၂) internet download manager နဲ့ Download လုပ်နည်း . နှစ်နည်းရှိတယ် .
real player (or) internet download manager ကို တင်ပေးထားပြီးသား အဲ့ကောင်ကို install လုပ်လိုက်
youtube ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ video ရဲ့ညာဖက်ထိတ်လေးမှာ Download လုပ်ဖို့ icon လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်. အဲ့ဒါလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ . Download link ကျလာပါလိမ့်မယ် .
အခု youtube downloader ကတော့ အလွယ်လေးပါ . software ကို run ပြီးရင် EnteraYou Tube URL or selectafile on your Hard Drive ဆိုတဲ့ စာတမ်းအောက်က ကွက်လပ်မှာ မိမိ Download လုပ်လိုတဲ့ video ရဲ့ url ကို ထည့်လိုက်ပြီး Download ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ . URL ဆိုတာ မိမိ Download လုပ်မယ့် video ဖိုင်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင် အပေါ်က internet လိပ်စာကို ဆိုလိုတာပါ . သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ် . အပေါ်ကလိပ်စာကို ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါ.
output format ကတော့ မိမိက ဘာ format နဲ့သိမ်းမှာလဲဆိုတာကို ဆိုလိုတာပါ . format ဆိုတာက file အမျိုးအစားကို ခေါ်တာပါ . mp3 player မှာ ထည့်မှာဆိုရင် .mp3 နဲ့သိမ်း၊ mp4 player မှာ ထည့်မှာဆိုရင်တော့ mp4 format နဲ့သိမ်း၊ phone ထဲမှာ သိမ်းချင်တယ်ဆိုရင် .3gp format နဲ့သိမ်း အဲ့လောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ် . ကွန်ပျူတာမှာ သိမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကြိုက်တဲ့ format နဲ့သိမ်းလို့ရပါတယ် ကောင်းတာကတော့